नाकाबन्दीका नाइकेलाई 'रेड कार्पेट', ईपीजी प्रतिवेदन बार्गेनिङ्‍को अस्त्र | Suvadin !
नाकाबन्दीका नाइकेलाई 'रेड कार्पेट', ईपीजी प्रतिवेदन बार्गेनिङ्‍को अस्त्र
एस जयशंकर जब बंगलादेशबाट बुधबार नेपालका लागि प्रस्थान गरेका थिए बंगलादेशले वक्तव्य जारी गरेर काश्मीर मामिलामा आफू भारतको साथ रहेको जनाएको छ । यसले गर्दा नेपाललाई समेत यो मामिलामा नैतिक दबाब सिर्जना गरिएको छ । भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले काश्मीर मामिलामा नेपाल सकारात्मक भएको दाबीसहितका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । विगतको हेपाहा प्रवृतीको रवैया अहिले पनि उत्तिकै छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै सच्चिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्षम बनाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो देखिएन ।
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्रि एस जयशंकर अहिले नेपालमा छन् । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा बुधबार रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिएको छ । उनी नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकको मेसो पारेर नेपाल आएका हुन् । ०७२ को भूकम्पले थिलथिलिएको नेपाल आफ्नो शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि मुलुकलाई डोर्‍याउने मुल कानुन बनाएर घोषणा गरिरहेको थियो ।
त्यही समयमा ०७२ असोज १ गते तत्कालीन भारतका विदेश सचिवको हैसियतमा उनी नेपाल आए । उनले तत्काल संविधान जारी नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दबाब दिए । तर, सरकारले उनको कुरा बेवास्ता गर्दै असोज ३ गते नेपाल संविधान ०७२ जारी गरियो ।
उनी भारत फर्किए र नेपामा नाकाबन्दी लगाए । एकातिर भूकम्पले भत्किएका भौतिक संरचना, अर्कोतिर नाकाबन्दी - जसले नुनतेलसमेत आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो अर्कोतिर मधेसवादी दललाई उचालेर राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउने काम गर्‍यो भारतले । जसका डिजाइनर अर्थात नाकाबन्दी नाइके थिए- अहिलेका भारतीय विदेशमन्त्री डा सुर्ब्रमन्यब जयशंकर ।
अहिले भारतका काश्मीरको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । उता पाकिस्तानले भारत सरकार हिटलरको रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ जाने तयारी थालेको छ भने पाकिस्तानलाई चीनको साथ छ । त्यसैगरी भारतमा विपक्षी दलले पनि भारत सरकार तानाशाहको रुपमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खस्किँदै गएको छविलाई उठाउने जिम्मेवारि अहिले विदेशमन्त्री एस जयशंकरको काँधमा छ ।
उनी यसअघि चीन भ्रमण गएका थिए । उनले चीनलाई काश्मीर मामिलामा कन्भिन्स गर्न खोजेको भए पनि उसले मानेन । त्यसैले यो मामिला चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा लगिदियो ।
केही दिन अघि मात्रै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भुटानको भ्रमणमा गएकोमा भुटानले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने आफूले चाहेको जनाएको थियो ।
एस जयशंकर जब बंगलादेशबाट बुधबार नेपालका लागि प्रस्थान गरेका थिए बंगलादेशले वक्तव्य जारी गरेर काश्मीर मामिलामा आफू भारतको साथ रहेको जनाएको छ । यसले गर्दा नेपाललाई समेत यो मामिलामा नैतिक दबाब सिर्जना गरिएको छ । भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले काश्मीर मामिलामा नेपाल सकारात्मक भएको दाबीसहितका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । तर, नेपाल भने क्षेत्रीय शान्ति आह्वान गरिरहेको छ ।
उनी नेपालमा नेपाल-भारत आयोगको पाँचौं संयुक्त बैठकको मेसो आएका हुन् । यही समयमा उनले विगतको छविलाई उठाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि विगतमा प्रतिबद्धता गरिएको सहयोग रकम दिने, विगतमा हस्ताक्षर गरिएका विषयहरु रामायण र बुद्धिस्ट सर्किट तत्काल विकास गर्ने, दुईपक्षीय व्यापार सहज गर्न सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार र उपकरण थप्ने, सीमामा बस्नेलाई डुबानको अनुभव नै हुन नदिने गरी काम गर्ने, खाद्य गुणस्तर र सुरक्षामा सहकार्य गर्ने, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ । सहमति भएको भनिएका अधिकांश बुँदाहरु दोहोर्‍याइएको छ । तर, महत्वपूर्ण बुँदामा पनि खासै छलफल भएन ।
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)ले नेपाल-भारतको १९५० को असमान सन्धी पुनरावलोकनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई बुझाइसकेपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने उक्त प्रतिवेदन बुझ्‍न मानेका छैनन् । उनले समय नभएको भन्दै टारिरहेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि प्रधानमन्त्री मोदीले 'उपयुक्त समय' मा प्रतिवदेन बुझ्‍न बताए । तर, 'उपयुक्त समय' को अर्थ के हो र कुन मिति अथवा समय उपयुक्त हो भन्‍ने विषय भने खुलाइएको छैन । यसको अर्थ भारतले आफू अनुकुलताका लागि र आफ्नो स्वार्थका लागि ईपीजी प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेमा कुनै शंका छैन । यसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
ईपीजीको गठन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदन बुझ्‍न मोदी आफैं अनिच्छुक रहनु रहस्यमय छ । जयशंकरले यसको जवाफ घुमारो पारामा टारेका छन् । दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपालका एजेण्डा हाबी भएको भन्दै मोदीले बुझ्‍न इच्छा नजनाएको आरोप लागिरहेको छ ।
त्यस्तै भारतका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहताले जयशंकरले नेपाल भ्रमणको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली जनताको मन जित्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मेहताले २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी गल्ती थियो भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, जयशंकरले उक्त विषय उठाउनसमेत चाहेनन् र गल्ती स्वीकार्नै परकै कुरा । विगतको हेपाहा प्रवृतीको रवैया अहिले पनि उत्तिकै छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै सच्चिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्षम बनाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो देखिएन ।
जयशंकरको भ्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भदौ अन्तिममा हुने नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका रुपमा हेरिएको छ ।
कुटनीतिक मर्यादा मिचेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग आमने-सामनेजस्तै देखिएका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबमा निकै भारतप्रति कठोर बनेका प्रधानमन्त्री ओलीको वास्तविक चरित्र विभिन्‍न चरणमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नाकाबन्दी नाइके नेपालमा आउँदा नाकाबन्दीका कट्टरो विरोधी भनिएका प्रधानमन्त्री ओली जयशंकरलाई भेट्ने यति विघ्‍न किन आत्तिए, यो अह्‍म प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्ता पूर्वनिर्धारित नभएको संकेत जयशंकरले ट्विटमार्फत दिएका छन् । उनले ट्विटमा प्रधानमन्त्रीको एकदमै व्यस्त समयका बाबजुद आफूलाई स्वागत गर्दै समय दिएको सन्तोष लागेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भेटले संयुक्त बैठक दुई घण्टा पर धकेलिएको थियो । बुधबार दिउँसो तीन बजे सुरु हुने भनिएको उक्त बैठक पाँचबजेमात्रै सुरु भएको थयो । त्यसमा पनि नेपालको कार्यकारी प्रमुखजस्तो व्यक्तिले अर्को देशको विदेशमन्त्रीलाई भेट्ने कुटनीतिक मर्यादा किन ख्याल गरिएन भन्‍ने स्वभाविक प्रश्‍न उठेको छ । विगतका बैठकहरुमा बैठक समापनपछि मात्रै विदेशमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न‍े चलन थियो । पाँच वर्षअघि संयुक्त बैठक सकिएपछिमात्रै तत्कालीन विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालासँग भेट गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकघण्टा लामो वार्ता गरेपछिमात्रै समकक्षी प्रदीप ज्ञवाली र जयशंकरबीच भेट भएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्रीले नै कुटनीतिक मर्यादा ख्याल नगर्दा मुलुको सार्वभौम राष्ट्रियता कमजोर हुने टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।